Marketing amin'ny vokatra: The Anatomy of a Unboxing Experience | Martech Zone
Marketing amin'ny vokatra: The Anatomy of a Unboxing Experience
Alahady, Desambra 24, 2017 Douglas Karr
Ny sasany aminareo dia mety hanopy ny masonareo amin'izany, fa ny fotoana voalohany nahitako ny famonosana vokatra mahatalanjona dia rehefa nividy AppleTV ho ahy ny namana akaiky iray. Io no fitaovana Apple voalohany voaraiko ary azo inoana fa nitarika ahy tamin'ny vokatra Apple am-polony izay ananako izao. Iray amin'ireo zava-niainana unboxing mahavariana kokoa ny MacBook Pro voalohany. Tonga lafatra tanteraka ilay boaty ary napetraka tamin'ny fomba lavorary ny MacBook rehefa namindra ilay fonosana ianao hahita azy. Nijery sy nahatsapa ho niavaka izy… ka manantena ny hahazo MacBook Pro vaovao aho isaky ny taona vitsivitsy (tara loatra aho izao).
Manohitra an'io amin'ny solosaina finday novidiko tamin'ny taon-dasa. Tsy Laptop Windows mora vidy io fa gaga be aho rehefa navoakan'izy ireo. Nofonosina tamin'ny baoritra volontsôkôlà tsotra izy ary nofonosina valizy ilay powerupply ary natosika anaty boaty fotsy sy manify ary taratasy. Na dia tsara tarehy aza ny solosaina finday, dia tsy namela na inona na inona ho an'ny saina fotsiny ilay fanefana boaty. Nandiso fanantenana marina izany. Ny tena ratsy kokoa dia nahatonga ahy hanontany tena hoe raha tena mitady hampiaiky volana ahy ny orinasa ao ambadiky ny solosaina finday sa hamonjy vola kely fotsiny amin'ny fonosana.
Ireo mpanjifa ankehitriny dia tafasaraka amin'ny traikefa fiantsenana ary mihetsika lavitra lavitra ny fahafaham-po avy hatrany izay tsapa rehefa mividy fivarotana. Izany no antony tokony hifantohana amin'ny laharam-pahamehana amin'ny faritra sisa taorinan'ny marikao amin'ny mpanjifa. Ny fanatsarana ny traikefa unboxing dia tsy tokony hohadinoina rehefa dinihina ny fiatraikany amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny. Jake Rheude, Fahatanterahana Stag Mena
Izahay dia namolavola fampidirana vitsivitsy ho an'ny mpanjifanay mba hampidirina miaraka amin'ireo vokatra ecommerce nandritra ny taona maro. Ny iray dia karatra fisaorana tsotra miaraka amin'ny fihenam-bidy azo zahana izay mitarika fihazonana tsara kokoa. Ny iray hafa dia ny karatra fizarana sosialy izay misy ny kaonty sosialin'ny orinasa rehetra ao aminy sy ny tenifototra hizarana ny sarin'ilay baiko an-tserasera. Isaky ny mizara ny baikon'ny mpanjifa ny orinasa dia mizara izany amin'ny alàlan'ny media sosialy. Io no fomba tsara hahafantarana ny mpanjifany an-tserasera ary koa hahazoana fizarana ara-tsosialy hisarihana mpanjifa vaovao.
Izany no iray amin'ireo sehatra ifantohana izay Fahatanterahana Stag Mena nizara ho fanao tsara indrindra amin'ny infografika, Anatomy ny fanandramana Unboxing tonga lafatra. Ireo manam-pahaizana dia nanadihady izay mamokatra be indrindra amin'ny mpanjifa, anisan'izany ny:
The Box - ny endrika boaty ivelany, fonosana fonosana ary atitany boaty.
Filler sy fonosana fonosana - taratasy taratasy mivalona misy marika, crinkle taratasy ary fitaovana fonosana vita amin'ny ondana.
Product Presentation - manasongadina ny vokatra lehibe sy ny manafina kojakoja ary rakitra.
Mandeha ambony sy any ankoatr'izay - manolotra andrana maimaimpoana, ao anatin'izany ny mari-pamantarana fiverenana, ary ny fampiroboroboana ny fizarana ara-tsosialy.
Zava-dehibe ny inserts - ampio naoty manokana, ary fitaovana ara-barotra izay manao dokam-barotra momba ny vokatra sy fampiroboroboana mifandraika amin'izany.
Ny antsipirian'ny infographic tsirairay avy ary manome torohevitra fanampiny momba ny fandrika mahazatra, ao anatin'izany ny boaty be loatra, voanjo, famonosana sarotra, ary kasety malemy.
Tags: tanterakatraikefa amin'ny vokatravarotra vokatraFahatanterahana Stag Menaunboxing